Somaliland: Cali Khaliif Galeyr oo Puntland ku eedeeyay bur burinta Khaatumo - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Cali Khaliif Galeyr oo Puntland ku eedeeyay bur burinta Khaatumo
Madaxweynaha maamulka Khatumo State Cali Khaliif Galeyr ayaa ku eedeeyay maamulka Puntland oo uu faragalin ba’an ku hayo jiritaanka maamulka Khatumo, isaga oo ku eedeeyay Puntland in ay ku lug leedahay khilaafka soo kala dhaxgalay maamulkiisa.
Kulan dhawaan garab ka mid ah baarlamanka maamulka Khatumo uu yeeshay Buuhoodle islamarkaana uu shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamuud Sheekh Cumar ayaa lagu sheegay in xilkii looga qaaday madaxweyne ku-xigeenkii maamulka Cabdulle Maxamed Heybe [Cagalule].
Laakiin isla garab kale oo baarlamaanka ka tirsan ayaa iyaguna fadhi ay yeesheen waxaa ay ku sheegeen in ay xilkii ka qaadeen madaxweynaha maamulka Khaatumo Cali Khaliif Galeyr iyo guddoomiyaha baarlamaanka.
Cali Khaliif oo la hadlayay BBC da ayaa sheegay in khilaafka ka dhax jira maamulka uu madaxweynaha yahay laga soo abaabulay sida uu hadalka u dhigay Garoowe iyo Muqdisho.
Degmada Buuhoodle oo ah halka ay xiisadan siyaasadeed ka jirto ayaa waxaa ku wada sugan madaxweynaha maamulka Khatumo iyo guddoomiyaha baarlmaaanka oo isku dhinac ah iyo dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka la sheegay in xilka laga qaaday iyo siyaasiyiin ay isku aragti yihiin.
Khilaafkan ayaa imanaya xili waaydii ugu danbeeyayba uu jiray wada hadal u dhaxeeyay madaxweynaha maamulka Khatumo iyo Soomaaliland, hasse ahaatee wali wada hadaladaasi ma noqon kuwo miro dhala.